Hlola iRotterdam, Netherlands - World Tourism Portal
Hlola iRotterdam, eNetherlands
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eRotterdam, Netherlands
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eRotterdam
Bukela ividiyo ngeRotterdam
Hlola iRotterdam umasipala nedolobha esifundazweni saseDashi saseNingizimu-Holland, esentshonalanga ne Abase Netherlands kanye nengxenye yeRandstad. Umasipala ungowesibili ngobukhulu ezweni (ngemuva Amsterdam), ngesibalo sabantu abacishe babe ngama-601,300 kanye nezakhamizi ezingaphezu kwezigidi ezingama-2.9 endaweni yayo yedolobha.
Ichweba laseRotterdam likhulu kunawo wonke eYurophu. Ukusuka ku-1962 kuya ku-2004, kwakuyitheku elixakeke kakhulu emhlabeni; lapho-ke kwagcotshwa khona Shanghai. Manje iRotterdam itheku lesine ngobukhulu emhlabeni.
IRotterdam yaziwa njengedolobha lokwakhiwa kwezakhiwo. Amakhilomitha ambalwa skwele enkabeni yedolobha anikeza umbono ophelele wokuthi ikhulu lamashumi amabili selikhiqize ngaphi ngokwakhiwa kwezakhiwo zanamuhla. Ngenxa yalomkhathi wanamuhla futhi ukuba khona kwezakhiwo eziningana eziphakeme, leli dolobha lithakazelisa kakhulu abantu abangamaDashi ukuvakasha.
Ukuhlala ekugcineni okungaphansi komhlahlandlela wefen Rotte izinsuku okungenani ze-900. Eduze kwe-1150, izikhukhula ezinkulu endaweni zaqeda ukuthuthukiswa, okuholela ekwakhiweni kwamachibi namadamu okuvikelayo. Kwakhiwa idamu eRotte noma 'Rotterdam' kuma1260s futhi lalitholakala eHoogstraat yanamuhla.
Yize iRotterdam yenze kahle ngemuva kweminyaka ephakathi kanye naku-'Golden Century '- cishe phakathi kwe1650 ne1750) kwakungaphambi kwengxenye yesibili yekhulu leshumi nesishiyagalolunye lapho idolobha laqala ukuzithuthukisa ngokushesha. Sisizwe ngokumba umgodi omusha wamanzi olwandle (i-Nieuwe Waterweg) iRotterdam yaqeda izinkinga zezinkinga ezibangelwa ukuthambeka komfula futhi yaqala ukuthola imikhumbi emikhulukazi eyayithwele imithwalo ye / kusuka eRuhrgebiet e Germany. Ukuhwebelana okuhlobene namachweba kanye nezimboni kwagqashuka, futhi idolobha laqala ukudonsela abafuduki abaningi abavela esifundazweni saseBrabant esampofu, lapho kwakhiwa khona iningizimu yomuzi. Ekupheleni kwekhulu lamashumi amabili iRotterdam ibiqhubeka nokuba yisikhungo sezomnotho esikhulu kunazo zonke eNetherlands. Kwakuphakathi kwaleso sikhathi nangempi yezwe yesibili lapho kwenziwa khona imisebenzi emikhulu yezokwakha ehlonishwayo, okuyingxenye ukukhombisa ukuziqhenya ngomnotho okusha okutholakele.
ENetherlands, iRotterdam inamaphesenti aphezulu kakhulu abantu abavela kwamanye amazwe abavela emazweni angenzi izimboni. Cishe i-50% yabantu abawona abomdabu eNetherlands noma okungenani banomzali oyedwa ozalwe ngaphandle kwezwe. Izibalo zakamuva zibonisa ukuthi amaSulumane akha eduze kwe-25% yezakhamizi zedolobha. Leli dolobha libuye libe lomunye wemiphakathi emikhulu kakhulu kusuka eCape Verde emhlabeni, kanye nomphakathi omkhulu kunabo bonke abavela eDutch Antilles.
Isimo sezulu saseRotterdam sihluke ngokuphelele kwamanye amadolobha amaDashi. Umqondo ungachazwa kangcono ngokuthi 'ungenza'. Kusukela kwabalindi ohlangana nabo kosomabhizinisi nabantu abasanda kufika njengabafuduki, bonke baphefumula ithemba elinamandla lokuqhubekela phambili nezinto nedolobha labo.
IRotterdam inesimo sezulu sasolwandle njengazo zonke izindawo ezisogwini lwaseDashi. Ubusika bufudumele kancane, kunamafu futhi kunenkungu ngesinye isikhathi. Intwasahlobo ivame ukuqala maphakathi no-Ephreli kusukela ngoMashi kanti amasonto okuqala enyanga asabanda futhi anezinsuku ezingama-6 zokuwa kweqhwa. Isizini ephezulu iqala ngoMeyi lapho idolobha liqala ukuza liphile futhi abantu bendawo nezivakashi baqala ukuphuma bayozijabulisa. Ihlobo ngezinye zezinto ezimnandi kakhulu kulo lonke izwekazi laseYurophu.
The Hague Isikhumulo sezindiza sitholakala 6km enyakatho enkabeni yedolobha.
Njengoba cishe wonke umuntu ku abase Netherlands kukhuluma okungenani isiNgisi esithile, ukuzungeza kufanele kube lula kakhulu kubavakashi abangakhuluma lolu limi kuphela.
UMarkthal (ihholo lemakethe), Ds. UJan Scharpstraat 29. IMon-Thu, Sat 10AM-8pm, Fri 10am-9pm, ILanga 12am-6pm. I-Markthal iyimakethe enkulu yokudla yangaphakathi / inkantolo yokudla, enamasheya amaningi athengisa imifino, inyama, inhlanzi, ushizi, amantongomane nokunye ukudla kanye namaphakethe amancane, izitolo ezinkulu, izitolo zotshwala. I-Markthal ivulwe ngo-Agasti 2014 futhi isakhiwo uqobo siyisibonelo esihle sokwakhiwa kabusha kweRotterdam yanamuhla. Ithandwa kakhulu ngabantu bendawo kanye nezivakashi ngokufanayo, ngakho-ke ingaxinana ikakhulukazi ngezimpelasonto.
Eminyuziyamu - ezikhumbuzo - iziwombezi zomoya eRotterdam
Zoos - Izindawo Zomlando Zokukhuleka - Izikhangibavakashi e Rotterdam
Ibhishi elihle elisondele kakhulu uhambo olude lwesitimela (i-32 min) kude neHook yaseHolland. Lapha uzothola ibhishi lesihlabathi elihle kakhulu ngokubhukuda okuhle nokuzijabulisa okwanele. Shiya idolobha laseHoek van Holland eceleni, akukho lutho lapho.
Ukuthola ulwazi olusezingeni eliphezulu kakhulu lolwandle olusendaweni yasemadolobheni ukuya eScheveningen lapho ungathola khona konke okuluthwa umlutha wolwandle ngephathi; Imigqa engapheli yemigoqo eseceleni kwasolwandle, izindawo zokudlela nezindawo ezinamakhaza kanye ne-boulevard ogwini oluhle lobuhle besihlabathi. Kungagcwala kakhulu lapha.
I-Rotterdam idlala ukusingathwa emicimbini eminingi, eminingi yayo yonyaka. Ngaphandle kwalokhu kukhona okuncane kakhulu okungaba kuhle kakhulu, ngakho-ke buza ngapha nangapha uhlole iwebhusayithi yeVVV. Izehlakalo ezimbalwa zeminyaka ezobizwa ngamagama:
Umncintiswano webhasikidi wezinsuku eziyisithupha ngoJanuwari
I-International Filamu Rotterdam, ebeka ikakhulukazi amafilimu azimele avela emhlabeni wonke amasonto amabili ngasekupheleni kukaJanuwari.
I-Art Rotterdam ngoFebhuwari ngabe uyayibona (futhi uyithenge) ubuciko besimanje.
Umncintiswano we-tennis womhlaba ngoFebhuwari.
IMotel Mozaique. Umculo, ubuciko nokusebenza. Hlanganisa nephrojekthi yokulala eyenza ukulala kwezobuciko noma ezindaweni ezikhethekile eRotterdam (Ephreli)
IMarathon ngo-Ephreli yaziwa kakhulu njengomjaho oshesha kakhulu.
Umkhosi wePoetry International ngoJuni.
I-Rotterdam Unlimited parade enkulu ethambekele eCaribbean nephathi enkabeni yedolobha ngoJuni, umkhosi wangaphambili weDunya kanye nowamahlobo wehlobo.
Umkhosi ongaphansi kweNorth Sea Jazz ngoJulayi unenqwaba yabaculi abadumile emhlabeni.
I-Racealon ngo-Agasti, umcimbi we-formula yomjaho wasemgwaqweni 1.
I-Heerlijk Rotterdam umcimbi wezinsuku ezintathu lapho ungasampula khona izitsha zokudlela ezivela eMichelin-star ngentengo encishisiwe (izinsuku ziyahlukahluka, uhlelo lwasehlobo ngokuvamile ngasekupheleni kuka-Agasti, uhlelo lokuqala lwasebusika e-2010 ngoJanuwari)
I-World Port Days ngempelasonto egcwele imisebenzi egxile ethekwini elikhulu laseRotterdam (ekuqaleni kukaSepthemba)
Umkhosi we-classical music Gergiev ngoSepthemba, oholwa ngumphathi we-master-conductor uValery Gergiev.
Njengoba ichweba elikhulu futhi inemigwaqo eminingi yamachibi namachibi, iRotterdam inokuningi ongakunikela ngabathandi bamanzi. Ukuhamba ngesikebhe: Kukhona amachibi amane amakhulu eRotterdam.
Zonke zinemiphakathi esebenzayo ye-yaching futhi ngezinye izikhathi izinhlanga zokuhamba ngomkhumbi ziyabonakala. Amaplas we-Zevenhuizer ahlala iningi labathandi beWindsurf. Izikebhe ezikhuphukayo nezisuka emkhunjini zingaqashwa endaweni eyi-Windmill ekugcineni kwempumalanga yeRottekade eVan Viet's. Lapho uvakashela iRotterdam nge-yacht yakho uzothola ukuthi amachweba amaningi amancanyana asemigwaqweni engenayo yonke indawo, ngabe ziningi zazo. Emfuleni iMaas uzothola iDolobha laseMarina kuphela, ngemuva kwebhuloho elisebhange eliseningizimu, kanye neVeerhaven, phakathi enkabeni yedolobha osebeni olusenyakatho. Ngaphandle kokuthi udinga indawo yokukhosela engcono yedolobha elingenamuntu uMarina, hamba ukuthola i-Veerhaven marina eyaziwayo, esemaphakathi kakhulu futhi ebabazekayo.
Izindawo ezinkulu zokuthenga kulesi sikhungo yiLijnbaan neHogogatat. Zombili zihamba ngezinyawo. ILijnbaan, egijima ibheke eningizimu isuka eWeena (eduzane neRotterdam Centraal) ibiyindlela yokuqala yokuthenga yezitolo emhlabeni ngesikhathi yakhiwa e1953. Manje ingumgwaqo omaphakathi wokuthenga onezitolo eziphakathi. Ngezimpelasonto kugcwele kakhulu. Ukuxhumanisa iLijnbaan neHogogatat yiBeurstraverse, ebizwa ngokuthi yiKoopgoot (Ukuthenga-isisu). Isigaba esingaphansi komhlaba sixhuma esiteshini sikaMasipala iBeurs. Konke kukhulu kunalokho futhi kuyamangaza ngedolobha laseDashi, kepha kulingana ngokuphelele nesifiso saseRotterdam sokuhluka. Uma uyifuna, cela amaKoopgoot, njengoba igama elisemthethweni laziwa kancane. Isipiliyoni sokuthenga esithe xaxa singatholakala eBotersloot nasePannekoekstraat, ezinezitolo eziningi ezizimele, ezithile ezingacacile. Yomibili imigwaqo isebenza ngokufana ngasempumalanga ukusuka esigcawini semakethe lapho kukhona khona iBlaak metro kanye nesiteshi sesitimela.
Kukhona cishe izimakethe zomoya ezinkulu ze-12 ezinkulu nezincane ezivulekile ezungeze iRotterdam. Iningi lazo yizindawo ezimnandi ongahamba kuzo. Indawo enhle ongayivakashela iMarket yangaphakathi yedolobha (iTue and Sat, ehlobo futhi eLangeni inguqulo encane) okuyimakethe enkulu (mayelana nezitolo zakwa450) evulekile yokudla komoya nemakethe yehadiwe. Kusemaphethelweni empumalanga yeHoogstraat eBinnenrotte. Okumangalisa futhi okumibalabala kakhulu yiMakethe yaseAfrikaanderplein (ENingizimu yomfula). Le makethe ilungiselelwe kakhulu abantu baseRotterdam base-Antillean, baseNingizimu Melika noma abomdabu wase-Afrika (iningi labo abahlala eduzane). Wed no-Sat, mayelana nezitebele ze-300.
UDe Bijenkorf; Lesi sitolo se-upmarket sinikezela okuningi ngokuya ngezingubo ezingcono, amakha, izindatshana zemfashini, ubucwebe nokunye. Isitolo sinikeza ikhwalithi, kepha iza ngentengo. Njalo ngonyaka ngo-Okthoba kukhona ukuthengiswa okukhethekile (izinsuku zokuhlanya ze-3) lapho ugijimisa ubungozi bokunyathelwa ngabazingeli bezitembu.
HEMA; le nkanyezi yokuthenga ngesabelomali saseDashi inebanga elilinganiselwe lezingubo, ukudla kanye ne-hardware. IHEMA inedumela lokuletha izimpahla ezisezingeni ngamanani ancintisanayo kakhulu. Okuningi okuthengisayo kungokwakhiwa okusha futhi okukhanyayo.
Ukuthenga okungapheli kwe-De Groene Passage iqoqo lezitolo eziqhubekayo kubandakanya isitolo sokudla, indawo yokudlela, isitolo sezincwadi kanye ne-butchery.
Izinto zokuthenga ushizi wamaDashi zidume kakhulu, ungazitholela ezinye ezitolo zokudla noma ezinhlobonhlobo ezibanzi emakethe. Ezinye izinto ezijwayelekile zamaDashi ama-stroopwafels, hagelslag kanye ne-drop (i-alcohol yotshwala).
Indawo ezungeze esiteshini kaMasipala iBlaak, ebizwa nge-Oude haven (i-Old Harbour), ayifanele nje ukuyibona kuphela kepha inezindawo eziningi zokudlela nezindawo zokudlela. Indawo yokudlela yaseRotterdam ithuthuka kakhulu ngokushesha ngezindawo zokudlela ezintsha ezivulwa kaningi. Ngenkathi ukunakwa okuningi kugxila ezindaweni ezintsha zokufisa zase-Michelin, kunenkambiso enkulu ebhekiswe ezindaweni zokudlela ezisezingeni eliphakeme eziphakathi nendawo ezinikeza okudla kwaseFrance / Dutch.
Isikhungo somlando seSchiedam kufaka phakathi ama-6 amaza omhlaba omude emhlabeni. Esikhungweni somlando ungathola neStelelijk Museum ekhangayo ngemibukiso emihle yobuciko besimanje. Kufinyelelwe kalula ngebhayisekili, noma uthathe
Idolobhana lomlando laseDelft, i-15 min. ukuhamba ngesitimela kusuka eRotterdam Centraal Station. Umlando futhi umangalisa kakhulu, kepha izivakashi kancane.
Idolobha elingumlando leDordrecht, imizuzu engu-20. ukugibela isitimela, noma okungcono, thatha i-Waterbus. Idolobhana elihle lomlando elinokuvakasha okuncane nomnyuziyamu omuhle kakhulu wesikhathi esidala.
Vakashela elincane elinezithombe edolobheni eliseGouda futhi ubone amafasitela amahle kakhulu engilazi esontweni iSt Johns, isikhumbuzo se-UNESCO. Futhi imizuzu ye-20 ngesitimela.
Kukhona igquma elincane eCarnisselande, eduze komgwaqo wokugcina weTram indlela 25. Iphakeme kuphela ngezinyawo ze-30 kepha uma ukhwela phezulu ikunikeza ukubukwa okuphefumulayo kwalo lonke idolobha laseRotterdam, nasemaphandleni aseningizimu yalo. Eduze kwabo kukhona i-'Carnisse grienden 'enhle yokuhamba nge-marshland nehlathi le-willow ehlathini lomfula iMeuse.
UDelta uyasebenza. I-Delta Works iqukethe uhla lwemisebenzi emikhulu ekuvikelweni kogu lapho umgoqo wokuhlinza wase-Oosterschelde uyinto enhle kakhulu.
Neeltje Jans. Ipaki yengqimba yamanzi e-Oosterschelde isiphepho sokuhlaselwa kwesivunguvungu.
I-Windmills yaseKinderdijk, lapho i-19 windmill isasiza ukulawula izinga lamanzi. Inombolo ye-Windmill 2 ivulekele umphakathi, ikuvumela ukuthi ubone ukusebenza kwangaphakathi.
Vakashela idolobhana eliphakathi neBrielle. Lesi sikhungo sihlanganiswe kahle ezindlini ezindala nasemasontweni, ebiyelwe yizindonga zokuqala zobumba ezivikela udonga. Kuneminyuziyamu ethile kanye ne-Roman Catholic temple yeMartyrs of Gorcum. Ukuhamba uzungeze idolobha nezinqola kuyindlela yokwelapha. Ungakwazi ukuchitha usuku kalula eBrielle.